योगेश भट्टराईको निर्देशनलाई ट्याक्सी चालकले लगाइदिए धोती, सिंहदरबारमा उथलपुथल !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
योगेश भट्टराईको निर्देशनलाई ट्याक्सी चालकले लगाइदिए धोती, सिंहदरबारमा उथलपुथल !
काठमाडौं– ट्याक्सी चालकहरुले ‘भिजिट नेपाल २०२०’ को सट्टा कम्युनिष्ट सरकारको विरोधका नारा लेख्ने भएका छन् । उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजको बैठकले ट्याक्सीमा विभिन्न स्लोगन टासेर सरकारको विरोध गर्ने निणर्य गरेको छ ।
सरकारले सबै सार्वजनिक यातायातमा ‘भिजिट नेपाल २०२०’को स्टिकर टास्ने अभियान सुरु गर्न लागेका छ तर ट्याक्सी चालकले भने विरोधका स्लोगन टासेर सरकारको विरोध गर्ने भएका छन् ।
ट्याक्सी चालक तथा व्यवसायीसँग सरकारले बारम्बार झुठ बोलेका कारण यो कदम चाल्न बाध्य भएको उनीहरुले बताएका छन् । पहिले पनि ट्याक्सीमा बिरोधको स्लोगन लेखेर टासिएको थियो । तरयातायात व्यवस्था विभागले देशमा अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन हुनलागेको र नेपाल बारे गलत सन्देश जाने भन्दै १ हप्ता भित्र माग सम्बोधन गर्ने भन्दै हटाउन लगाएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि माग सम्बोधन नभएको समाजले जनाएको छ ।
ट्याक्सीको भाडा २०६९ सालदेखि समायोजन नभएको भाडा बैज्ञानिक ढंगले समायोजन गर्नुपर्ने र निजी सवारीसाधनलाई भाडामा प्यासेन्जर बोक्न रोक्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
योगेश भट्टराईलाई सर्वोच्चको धक्का, तुहिइयो यति ठूलो सपना